Eo Amin’ny 70% n’ny Tanora Iraniana No Mampiasa Fitaovana Tsy Ara-dalàna Famakiana Sivana Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2014 12:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, فارسی, македонски, Italiano, বাংলা, čeština , Deutsch, عربي, 繁體中文, 简体中文, Français, polski, English
“Miaraka amintsika Andriamanitra. Hosivaninao ihany koa ve izy?” Sary avy amin'i Cyrus Farivar tao amin'ny Flickr (CC BY-ND-SA 2.0)
Tamin'ny tatitra navoakan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ao Iran, nanambara ny governemanta Iraniana fa tanora 23,5 tapitrisa no mampiasa aterineto, ny 69,3 isanjaton'izy ireo no mampiasa ny teknolojia famakiana sivana tahaka ny proxy sy ny VPN – tambajotran-tserasera tsy miankina izay manome fidirana amin'ny “aterineto manerantany”.
Amin'izao fotoana izao, matetika mifanehitra amin'ny aro-afo (pare-feu) ny Iraniana rehefa miezaka miditra amin'ny habaka izay hita fa manohitra ny governemanta na ny foto-kevitra Islamika ao amin'ny firenena. Tsy nilaza momba ny maha-ara-dalàna ireo fitaovana famakiana sivana ny vaovao. Saingy araka ny voalazan'ny lisitry ny Heloka Informatika ao Iran, samy tsy ara-dalàna ny fizarana ny teknolojia famakiana sivana sy ny toro-lalana fampiasana izany fitaovana izany. Mety hiafara amin'ny sazy henjana ny fanitsakitsahana izany lalàna izany.
Mijanona ho lohahevitra misafotofoto sy tsy mampanara-dalàna ny politikan'ny aterineto ao Iran. Tamin'ny herinandro lasa teo, nilaza ny filoha Hassan Rouhani fa tsy tokony hahomby mihitsy ao amin'ny firenena tahaka an'i Iran ny fanasivanana; saingy andro vitsy taty aoriana, nanomboka nanakatona tranokalam-baovao tsy manana fahazoan-dalana amin'ny fampitam-baovao araka ny tokony ho izy ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika. Tahaka izany ihany koa, raha anisan'ireo mpisera Twitter sy Facebook malaza indrindra ao amin'ny firenena i Rouhani sy ireo mpikambana goavana ao amin'ny kabinetrany, mbola mikatona hoan'ireo mpisera aterineto Iraniana mazoto ireo tambajotra sosialy roa ireo.
Raha nilaza ny sasany fa iray amin'ireo sehatra vitsy izay ifanojoan'ny fahaiza-miteny sy ny fihetsika ny politika aterineton'i Rouhani, tamin'ny fanasongadinana ireo fanatsarana vao haingana ny foto-drafitrasan'ny aterineto finday sy ny aterineto an-trano (fixe), ny tatitra tahaka ity iray ity no mampaharitra hatrany ny fahatsapana fisalasalana feno eo amin'ireo mpiserasera marobe sy ny mpisolovavan'ny aterineto misokatra ao amin'ny firenena.